IOS 10.2 iya kuzisa umsebenzi weqhosha | | Iindaba zeGajethi
Ngalo lonke ixesha inkampani esekwe kwiCupertino isungula uhlobo olutsha lwe-iOS, ngakumbi xa iyi-beta, kancinci kancinci abaphuhlisi bayayivavanya ukuzama ukufumana yonke imisebenzi enganxibelelani neApple kwiinkcukacha zayo. Ukufika kwe-iOS 10.2 kuhlobo lwayo lokugqibela, njengoko okwangoku ikwi-beta, isinika iqhosha lokuphakuzela elifihlwe ngaphakathi kwenkqubo yokusebenza. Eli qhosha lokuphakuzela liza kwenza uhlobo lwealam kwi-iPhone kwaye lenze umnxeba kwiinkonzo zongxamiseko. Lo msebenzi unokuba luncedo kakhulu kwimeko yeengozi zendlela okanye ukoyikisa iinjongo zomntu.
I-India lelinye lawona mazwe aneengxaki ezininzi, ukubabiza ngandlela thile, ibeka iApple ngexesha lokuba ikwazi ukuqala ukuthengisa izixhobo zayo kwilizwe. Enye yeemfuno zokugqibela ezenziwe ngurhulumente waseIndiya inento yokwenza nokufakwa kweqhosha lokoyika, iqhosha elinokusetyenziselwa ukwenza umnxeba ngokukhawuleza kwiinkonzo zongxamiseko xa abafazi behlaselwa okanye besengozini.
Ngokusengqiqweni iApple yayingenanjongo yokongeza iqhosha elitsha kwiitheminali, kwaye ngaphantsi ukuba yayililizwe elithile kuphela, ke oko kuphunyezwe ngaphakathi kokuphumla / ukuqala kweqhosha. Eli qhosha loyikiso skwaye usebenze ngokucinezela kahlanu kwelo qhosha, ngelo xesha i-iPhone iya kuqala ukukhupha i-aloustic alarm kwaye iqale ukwenza umnxeba kwiinkonzo zongxamiseko.
Kwi-podcast esinayo kwi-iPhone eyiyo, ugxa wethu uLuis Padilla uzame lo msebenzi mtsha. Ungasibona isiphumo kwividiyo engentla. Ngendlela, ukuba uyayithanda itekhnoloji ngokubanzi, ndincoma ukuba ujoyine ipodcast yethu apho Asithethi nge-Apple kuphela, kodwa sithetha ngetekhnoloji ngokubanziNangona iimveliso zenkampani esekwe eCupertino zidlala indima ekhethekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » IOS 10.2 iya kuzisa uloyiko lomsebenzi weqhosha
INetgear WN3000RP eyinethiwekhi ye-Wi-Fi eyandisiweyo enexabiso elinomtsalane